မှနျးထားတဲ့အတိုငျးဖွဈမလာဘဲ ပိုးမီကို လောငျးကွေးငှဆေယျသိနျးပေးလိုကျရပွီဖွဈတဲ့ ရဲနောငျ – Askstyle
မှနျးထားတဲ့အတိုငျးဖွဈမလာဘဲ ပိုးမီကို လောငျးကွေးငှဆေယျသိနျးပေးလိုကျရပွီဖွဈတဲ့ ရဲနောငျ
ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါအစီအစဉ်ကြီးကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-4 ကတော့ Season-1,2,3 ရဲ့အစဉ်အလာကိုရိုက်ချိုးခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ အရင် Season သုံးခုစလုံးမှာ Winnerဆုကြီးကို ယောက်ျားလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေသာရခဲ့ပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် အက်စတာက Winner ဆုကြီးကိုထိုက်တန်စွာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရဲနောင်ကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့အစဉ်အလာအရ Winner ဆုကြီးကို ယောက်ျားလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေသာရမယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပိုးမီကတော့ မိန်းကလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားသာတာများနေတဲ့ Season-4 မှာ မိန်းကလေးပဲရမယ်လို့ ဆယ်သိန်းကြေးလောင်းကြေးထပ်ခဲ့တာပါ။ မနေ့ညကပြိုင်ပွဲရလဒ်အပြီးမှာတော့ ရဲနောင်က“ အက်စတာကိုပြောလိုက်ပါ ကျွှန်တော်ရှုံးပြီလို့…ဆယ်သိန်းရေ အမျှ အမျှ အမျှ” ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ပိုးမီကတော့ “စိတ်မကောင်းဘူး မဲနူလေးရေ…ဆယ်သိန်း လာထား” ဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရမျှဝေခဲ့တာပါ။
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့အစဉ်အလာကိုချိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အက်စတာကြောင့် ပိုးမီကတော့ ရဲနောင်ဆီက ဆယ်သိန်းရသွားပါပြီနော်။ ရဲနောင်ကတော့ အထင်နဲ့အမြင်တက်တက်စင်အောင် လွဲသွားခဲ့ပြီဆိုရမှာပါ။ ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော…မနေ့ညက Winner ရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အထင်နဲ့အမြင်ထပ်တူမကျခဲ့တဲ့သူတွေ ရှိလား???
Source – Poe Mi, Ye Naung
ပရိသတတြှစေိတဝြငတြစားကှည့ရြှုခဲ့ရတဲ့ မှနမြာအိုငဒြေါအစီအစဉကြှီးကတော့ ပှီးဆုံးသှားခဲ့ပှီဖှဈပါတယြ။ မှနမြာအိုငဒြေါ Season-4 ကတော့ Season-1,2,3 ရဲ့အစဉအြလာကိုရိုကခြွိုးခဲ့ပှီလို့ဆိုရမှာပါ။ အရငြ Season သုံးခုစလုံးမှာ Winnerဆုကှီးကို ယောကြွားလေးပှိုငပြှဲဝငတြှသောရခဲ့ပမယြေ့ ဒီတဈခေါကမြှာတော့ ပှိုငပြှဲဝငြ အကစြတာက Winner ဆုကှီးကိုထိုကတြနစြှာ ရရှိခဲ့ပါတယြ။
ရဲနောငကြတော့ မှနမြာအိုငဒြေါရဲ့အစဉအြလာအရ Winner ဆုကှီးကို ယောကြွားလေးပှိုငပြှဲဝငတြှသောရမယလြို့ ခန့မြှနြးခဲ့တာဖှဈပှီး ပိုးမီကတော့ မိနြးကလေးပှိုငပြှဲဝငတြှအေားသာတာမွားနတေဲ့ Season-4 မှာ မိနြးကလေးပဲရမယလြို့ ဆယသြိနြးကှေးလောငြးကှေးထပခြဲ့တာပါ။ မနညေ့ကပှိုငပြှဲရလဒအြပှီးမှာတော့ ရဲနောငကြ“ အကစြတာကိုပှောလိုကပြါ ကွှနတြောရြှုံးပှီလို့…ဆယသြိနြးရေ အမွှ အမွှ အမွှ” ဆိုပှီးသူ့ရဲ့ဖဘှေ့တခြစြာမကွနြှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယြ။ ပိုးမီကတော့ “စိတမြကောငြးဘူး မဲနူလေးရေ…ဆယသြိနြး လာထား” ဆိုပှီး ဝမြးသာအားရမွှဝခေဲ့တာပါ။
ပရိသတကြှီးရေ မှနမြာအိုငဒြေါရဲ့အစဉအြလာကိုခွိုးဖောကနြိုငခြဲ့တဲ့ အကစြတာကှောငြ့ ပိုးမီကတော့ ရဲနောငဆြီက ဆယသြိနြးရသှားပါပှီနြော။ ရဲနောငကြတော့ အထငနြဲ့အမှငတြကတြကစြငအြောငြ လှဲသှားခဲ့ပှီဆိုရမှာပါ။ ပရိသတကြှီးထဲမှာရော…မနညေ့က Winner ရလဒနြဲ့ပတသြကပြှီး အထငနြဲ့အမှငထြပတြူမကခွဲ့တဲ့သူတှေ ရှိလား???